zụta Etravirine ntụ ntụ (269055-15-4) hplc ma98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Etravirine ntụ ntụ
SKU: 269055-15-4. Category: R & D mmeghachi omume
Etravirine bụ ọgwụ na-egbochi ọgwụ nje nke na-egbochi nje virus na-akpata immunodeficiency virus (HIV) site n'ịba ụba n'ime ahụ gị. A na-eji etravirine eji ọgwụ ndị ọzọ agwọ ọrịa HIV na ndị okenye na ụmụaka ndị dịkarịrị afọ 6. Ọrịa HIV na - akpata ọrịa immunodeficiency (AIDS). Etravirine abụghị ọgwụgwọ maka HIV ma ọ bụ AIDS.
Molekụla Formula: C20H15BrN6O
Ọbara arọ: 435.284
Etravirine ntụ ntụ nwere ike ịmekọrịta ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na-ebute na plasma gbanwere n'ọnọdụ ndị ọzọ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ nke Etravirine ntụ ntụ. A ga-agwa ndị ọrịa ka ha kọọ akụkọ ọgwụ niile ha na-aṅụ, gụnyere ọgwụ ndị na-abụghị ndị na-edeghị aha na ihe oriri na nri; karịsịa St. John wort.
Ihe nwere ike ime ka nje HIV na-eguzogide n'etiti ndị na-emechighị transcriptase inhibitors (NNRTI) dị ma ọ bụghị nke a nyochachara. A na-atụ anya na ndị na-eguzogide NNRTI ndị ọzọ na-agbaso na ọdịda na-adabaghị na usoro Etravirine ntụ ntụ nwere maka ọdịda ọdịda ahụ. A ghaghị ime nlezianya ahọrọ nke ndị na-egbochi ọrịa antiretroviral maka usoro ọgwụ ọgwụ onye ọrịa.
mmeghari akpụkpọ anụ - ọkụ, akpịrị akpịrị, ọzịza na ihu gị ma ọ bụ ire gị, na-ere ọkụ n'anya gị, mgbu anụ ahụ, na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ nke na-acha odo odo nke na-agbasa (karịsịa na ihu ma ọ bụ ahụ dị elu) ma na-akpata ọnyá ma na-agba.
gbanwee ọdịdị ma ọ bụ ọnọdụ nke abụba ahụ (karịsịa na ogwe aka gị, ụkwụ, ihu, olu, akwara, na n'úkwù). "
Ntụziaka ntụziaka Etravirine Powder Recipes
1 nyochaa maka Etravirine ntụ ntụ
Etravirine ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
Stanolone ntụ ntụ